काठमाडौं, ११ असार । साधारणतया जग्गे शुभकार्यका लागि बनाइन्छ । वैवाहिक कार्यक्रमका लागि होस् या कुनै पूजाआजाको लागि होस्, जग्गे अनिवार्य हुन्छ । र, हालै चोभारमा भने अलिक भिन्न दृश्य देखिएको समाचार आजको सौर्य...
एमालेले विष्टलाई नियुक्त गरेपछि नगरकोटी सुटुक्क बिदा भइन्
काठमाडौं, ११ असार । खेलकुद मन्त्रालयले राखेपकी सदस्य शकुन्तला नगरकोटीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जेठ ३२ गते सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । परिषद्मा नगरकोटीकै ११ दिने कार्यकालमा राष्ट्रपति रनिङसिल्ड पोखरामा सम्पन्न भएको समाचार आजको...
कोरिया जान अर्को नयाँ नियम, कामदारले पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा दिनुपर्ने
काठमाडौं, ११ असार । छैटौँ इपिएस टपिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जाने कामदारले पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । इपिएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाको स्तरीय पाठ्यपुस्तकको सम्पादित नयाँ संस्करण ल्याएपछि...
काठमाडौँ नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का (अपडेट)
काठमाडौँ, १० असार । नेपालमा बिहीबार राति फेरि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बिहीबार राति ९ बजेर ७ मिनेट जाँदा नुवाकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.३ रेक्टर स्केलको पराकम्पन गएको हो । भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख...
भारी बर्षासँगै बाढी आउन सक्ने चेतावनीपछि कैलालीमा ‘हाइअलर्ट’
धनगढी, १० असार । मध्य तथा सुदूरपश्चिमका जिल्लामा भारी बर्षासँगै बाढी आउन सक्ने चेतावनीपछि कैलालीलाई ‘हाइअलर्ट’मा राखिएको छ । जिल्ला आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र, कैलालीले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरी तयारीमा बस्न अनुरोध गरेको छ ।...
« 1 … 5,929 5,930 5,931 5,932 5,933 … 6,938 »
अष्ट्रेलियामा नेपालीमाथि ठगी धन्दा चलाउने एक नेपाली यसरी परे प्रहरी फन्दामा
प्रधानमन्त्री ओली निजी निवास बालकोट पुग्दा यस्तो देखियो, हेर्नुस् तस्वीरहरु
बामदेव निवास भैंसेपाटी पुगे अध्यक्ष प्रचण्ड
उपत्यकामा लकडाउन होइन फेरि जोरबिरजोर लागू गर्ने तयारी
डब्ल्यूएचओ भन्छ– आफैं सुरक्षित हुनुस्, कोरोनाविरुद्धको उपयुक्त खोप कहिल्यै पत्ता लाग्दैन
४ दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण दक्षिण कोरियामा १३ जनाको मृत्यु, १३ जना बेपत्ता
उपत्यकाको कुन–कुन अस्पतालबाट हुन्छ कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन ?
अख्तियारका १५ कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण देखियो
सलहको ‘वल्र्ड टुर’ ! मौसम खुलेसँगै चीनको युनान प्रान्त पुग्यो
समुदायमा संक्रमणको स्तर हेरेर लकडाउन निर्धारण गरौं : सभापति देउवा
देउवा र ठाकुरसहित बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे विज्ञसँग छलफल